Weydiiso dayactir gurigaaga, xayndaabka iyo dhismaha
</bold> XAALADA </bold>
Dayactirrada deg-degga ah waxay sii ahaan doonaan mudnaanteena ugu sareysa waana sii socon doonnaa howsha. Haddii aad go'doominaysid, go'doomin ama muujineyso astaamaha coronavirus, fadlan horay noogu soo sheeg si aan u qaadno tallaabooyin aan adiga, deriskaaga iyo shaqaalaheenaba ku badbaadin karno.
Tusaalooyinka dayactirka degdega ah waa daadis aan la xakamayn karin, luminta awooda oo dhan ama dayactirka looga baahan yahay caafimaadka iyo amniga degganeyaasha
Lambarka taleefanka si looga warbixiyo dayactirka degdega ah: 0800 389 2005
Dayactirrada cusub ee aan degdegga ahayn loo ballamay illaa ogeysiis dambe. Si kastaba ha noqotee, weli waad ku soo sheegi kartaa hagaajintaas adoo wacaya taleefanka, emaylka ama u maraya shaqadeena 'warbixinta dayactirka' ee barnaamijkan W11, si markaas aan u galno dhammaan faahfaahinta oo aan mudnaanta siino isla marka ay adeegyada caadiga ah dib u bilaabaan.
Lambarka taleefanka: 0800 389 2005
Iimayl ahaan: lancasterwestoffice@rbkc.gov.uk , ama waxaad u maraysaa barnaamijkeena W11 (faahfaahinta hoosta).
App: Ka warbixi shaqada 'Soo sheeg dayactir' bogga bogga ee barnaamijkan
</bold> WARBIXIN </bold>
Noo sheeg haddii ay jiraan wax haddii loo baahdo in gurigaaga wax laga hagaajiyo annaguna waan la xiriiri doonnaa si aan ballan uga qabanno. Haddii foomkani shaqeyn waayo, wac 0800 137 111.
U DIIWAANGALINTA DHAQAALAHAAGA AMA HALKAN
Waxaad weydiisan kartaa hagaajin aagga la wadaago adigoo foomkan ah. Kooxdayada dayactirka guriga gudaheeda ayaa sida ugu dhaqsaha badan ula tacaali doonta isla markaana waad la socon kartaa horumarka shaqada.
Soo Bixinta Arrinta